That's so good, right?: September 2008
The Waiter (II)
သူ့ကိုပြန်လည်ပွေ့ဖက်ရင်း ရင်ခြင်းအပ်မိတော့ သန်မာတဲ့လက်မောင်းတွေရဲ့ခိုင်မာမှု ၊ နွေးထွေးတဲ့ ရင်ငွေ့နွေးနွေးကို ခံစားမိရပေါ့လေ။ ကျွန်မ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ dress ရဲ့နောက်ဖက်ကဇစ်တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာ ဖြုတ်နေတာကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက်တည်းသိနေရတော့ ရင်ခုန်တာများ တဒိန်းဒိန်းဖြစ်ကရော။
အကြည့်စူးစူးတွေ၊ အနမ်းပြင်းရှရှတွေတွေနဲ့ သူ့မျက်ဝန်းထဲမှာ တက်မက်မှု ၀ိုင်ချိုချိုတွေကိုလည်း တွေ့နေရတယ်။ ဒီကိုလာဖြစ်တာမှန်သွားပြီပေါ့....။ အခုတော့ သူ့ရေလျှင်ကြောမှာ ရေခဲတုံးလေးလို ပေါလေမျော။
ကျွန်မလက်ကိုဆွဲကိုင်ပြီး အိပ်ယာရှိရာကို ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ပြီးတော့ သူ့ jeans ရဲ့ကြယ်သီးလေးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖြူတ်ပေးစေတာပေါ့။ခဏခြင်းမှာပဲ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ underwear တွေဟာခြေရင်းကိုမရောက်တရောက်။ သူ့ရဲ့ပွေ့ဖက်မှုက ခိုင်မာသလို နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့တွေကလည်း ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေ သလားပဲ။
အိပ်ယာပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းညင်သာ လှဲလျောင်းစေရင်း ကျွန်မရဲ့bra တွေကို ခပ်နှေးနှေးချွတ်တယ်။ ရွှေရင်အစုံကို ညင်ညင်သာသာပါပဲ ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်စပြုတယ်ပေါ့။ ဒီအခ‘ျိန်မှာ အိပ်ယာပေါ်လှဲလျောင်းရင်း သူလုပ်ကိုင်သမျှကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ကြည်ံနေမိတော့တာ။ ကျွန်မဘေးမှာ လှဲရင်း ရင်သားတစ်ဖက်က နို့သီးခေါင်းလေးကို ငုံတယ်၊စုပ်တယ်၊လျှာလေးနဲ့ကလိတယ် .........အား.....အ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ဗိုက်သားလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ကိုလျှောသွားရင်း ကျွန်မရဲ့ clit ကို.......အ......အ ဆွပေးတယ်။
အခုပြောပြနေတာတွေအားလုံးဟာ သူ့ရဲ့လျှာဖျား.......သူ့လက်ညှိုးလေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် climax ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်နေမိတဲ့ ကျွန်မအဖြစ်အပျက်ကို မြင်သာအောင်မစွမ်းပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ သူ့ခေါင်းကိုဆွဲမော့စေရင်း "I want you inside me" ။ကျွန်မ အသံတွေက ခြောက်ကပ်ကပ် ဖြစ်သွားသလားပဲ။ သူ့လီးကလည်း ကျွန်မခြေထောက်တွေရဲ့ကြားမှာ ခုန်ခုန်ထနေရော။ မျက်လွှာကို အသာချ အသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်း...... သူကျွန်မရဲ့ panty ကိုဆွဲချွတ် ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို သူ့ခါးမှာချိတ်စေရင်း ။ "Wait, ငါမင်းကို ခဏကြည့်ဦးမယ်" ဟုတ်တယ်လေ ကြည့်ချင်သေးတာပေါ့ သူ့ဟာကို။ရင်ခုန်ဖွယ် ရင်အုပ်ကား ကားတွေ၊ ဘယ်ရီသားတွေအမြှောင်းမြှောင်းနဲ့ ABS ၊ပြီးတော့ မကြီးမသေး ထွားထွားလှလှ ရွှေလီး။ အို..........ဆိုဒ်အကြီးအသေးက အရေးမကြီးဘူးလို့ပြောကြတဲ့ မိန်းမတွေ..သူတို့ ညာတာ။ ကြီးလွန်းရင်နာမှာ ၊ သေးလွန်းရင်လည်း မကောင်း ဒီလိုကောင်လေးရဲ့ ဆိုဒ်နဲ့ဆို သူတို့ကြိုက်မှ ကြိုက်ပဲပြောကြမှာ မြင်ယောင်သေး။
ကျွန်မခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို သူ့ပခုံးပေါ်တင်ရင်း အပေါက်ထဲကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ အာ....ဒီအတိုင်းသွင်းပြီး ငြိမ်နေတယ်...ဟွန်း။ ကြွက်သားတွေကို ရှုံ့ပြီးညှစ်လိုက်လျှော့လိုက် လုပ်ပေးမိတော့ "Ahhh...." he moaned။
"A A A Ahhh" ....သူ့moan ကပိုကျယ်လာသလို သူ့လီးကလည်း ပိုမာလာတယ်။ ကြွက်သားကို ရှုံ့ချည်လျှော့ချည်လုပ်ပြီး သူ့လီးကိုညှစ်ပေးလိုက်တာလေ။ "Oh Fuck" သူ့အသက်ရှူသံပြင်းလာပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်စပြုလာတယ်။အောက်ကနေ ပင့်ပြီးစောင့်တော့ ကျွန်မကို ထိတာများ...so good feels ။ ဒီအချိန်မှာ သူနဲ့မတွေ့ခင် ကအတွေးတွေ လုံးဝမရှိတော့သလို စိုးရိမ်နေတာတွေလည် ဟိုး....အဝေးပါ။
သူ့စောင့်ချက်တွေက အရမ်းကောင်း.....အား...အ သူ့တင်ပါးတွေကို ဆွဲကိုင်ပြီး ညှစ်ပေးမိတော သူ့လီးကပိုမာ လာသလို စောင့်ချက်တွေကလည်း မြန်လာတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေက မှေးစင်းလာသလို မေးကြောတွေက ထောင်နေတော့ မကြာခင်သူ့ climax ရောက်တော့မယ်ပေါ့လေ။ ခပ်ပြင်းပြင်းစောင့်ချက်တွေနဲ့အတူ တစ်ချက် မွှေလိုက်ရင်း အတွင်းထဲမှာ နွေးကနဲ နွေးကနဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အင်း......ရှီး.....ကျွန်မနံဘေးကို လှဲလျောင်း ရင်း သူ့လက်မောင်းတွေနဲ့ဖက်တွယ်ထားတယ်....ကျွန်မလည်တိုင်တွေကို ခပ်ဖွဖွနမ်းတဲ့အချိန်ထိ သူ့အသက် ရှူသံပြင်းပြင်းကို ခံစားရမိ နေတုန်း။
"Give me justaminute, and then we'll go again." he said.
ကျွန်မနားလည်ထားသလောက်ကတော့ တွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ယောက်ျားတော်တော်များများဟာ တစ်ကြိမ်လောက် ချစ်ပွဲဝင်ပြီးရင် ပြန်လည်ပြီး စွမ်းအင်ပြည့်ဖို့ (ဆိုလိုတာက အားရပါးရ မာတောင်ဖို့) နာရီအနည်းငယ်အနား ယူရုံနဲ့မရဘဲ ရက်အနည်းငယ်လောက်အနားယူမှ ရတယ်ဆိုတာ။
အချိန်နည်းနည်းကြာတော့ သူ့အနမ်းလေးတွေ နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်မရဲ့sensitive spots လေးတွေကို စတင်ပစ်ခတ်လာပြန်ပြီ။ သူ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့ ကျွန်မနှုတ်ခမ်း တွေ ၊ဗိုက်သားတွေ၊နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းခြင်း....မိန်းမူးသာယာစွာ တို့ထိကစားတာလေ။ အား......သူ့ငပဲရဲ့ မာကျောလာမှုကို ဒါရိုက်သိရှိ လိုက်မှ ကျွန်မအပေါက်ထဲမှာ သူ့ဟာကို ထည့်စိမ်ထားမှန်းသတိရတယ်။ ပြီးသွားပေမဲ့မနှုတ်ဘဲ ထည့်တားတာကိုးလေ။
ပုစွန်ထုပ်ကွေး ပုံစံနဲ့ နောက်ကနေအသွင်းအထုတ်ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းခြင်း....................တစ်ချက်ချင်း လုပ်နေတာ။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ကျွန်မရဲ့ clit ကိုကလိနေတော့ ကျွန်မမှာ ကောင်းကင်ကြီးကနေ မြေကြီးကို အရှိန်ပြင်းပြင်းထိုးကျသွားလိုက် ပြန်တက်သွားလိုက်...အား...အ။ climax ဖြစ်နေတာကို သူက ခပ်ဖြည်းဖြည်းသာ အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း မွှေရင်းကြည့်နေတာ။
"Oh God, you are driving me crazy," I cried.
သူကပြုံးရင်း "What do you want me to do?"
"Like this?"သူအားရှိသလောက် အစွမ်းကုန်ဆောင့်ရင်းပြောတာ။ အား...ခပ်ပြင်းပြင်းအရသာနဲ့အတူ အခုများ သေတော့မလောက်ခံစားလိုက်ရတာများ....ရှီး..။
သူ့ရဲ့သက်လုံကောင်းတာကို အံ့အားသင့်မိတယ်။ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်တွေရဲ့ အားမာန်မျိုးသူ့မှာတွေ့ရတော့ ကျွန်မမှာ ငယ်မူငယ်သွေးတွေ ပြန်ရသလို ခံစားရမိတော့တာပေါ့။အရှိန်လေးရလာတာနဲ့ လီးရဲ့မာကျော တောင့်တင်းမှုပိုကဲလာတာကို ခံစားရရှိလာတော့ သူ့မျက်နှာကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းမော့ကြည့်မိတယ်။ ကိုယ်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်ရဲ့ ပြီးခါနီးမျက်နှာကို မြင်ရတာကြည့်ရတာ ပိုပြီး ဖီးလ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ ချွေးဥလေးတွေခိုနေတဲ့ မျက်နှာရဲရဲလေးက တစ်မျိုးတစ်ဘာသာ........အား အ...စောင့်ချက်တွေ ပိုမြန်လာသလို အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းနဲ့အတူ ကျွန်မရဲ့ အပေါက်ထဲက သူ့ဒစ်ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုကို ခံစားသိရှိရတာများ..။ ဒီတစ်ခါတော့ အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ရင်း..... "Wow," he sighed."That was awesome."
"ခင်ဗျား ဒီည ဒီမှာပဲ နေတော့မှာလား။" ကျွန်မမျက်နှာကို မော့ကြည့်ရင်း စူးစမ်းတော့ သူသိချင်တာကို မသိချင် ယောင်ဆောင်ပြီး... "အင်း.... အဲဒီလိုတော့ တွေးမထားဘူးကွ.... အခန်းခကတော့ရှင်းပြီးပါပြီ"ဆိုတော့ သူခေါင်းကို တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်ပြရင်း ကိုယ်ကိုတစောင်းလှဲလိုက်တယ်။
"ကျွန်တော် အိမ်ပြန်သင့်တာပေါ့ မဟုတ်ဖူးလား။" အဖြေသာပေးတာ နေရာကတော့ လုံးဝမရွေ့သေးဘူး သူ့မှာ။
ကျွန်မရင်ခွင်ပေါ်မှာ ခေါင်းမှေးတင်ထားရင်း အသက်ရှူသံငြိမ်လာတယ်။ သူ့ရဲ့ပိုးသားလိုနူးညံ့နေတဲ့ ဆံသား လေးတွေ ခပ်ဖွဖွပွတ်သပ်ပေးမိချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ဖက်တွယ်ထားတဲ့ လက်မောင်းတွေက ပြေလျော့လာသလို အသက်ရှူသံကလည်း ပိုပြီးဖြေးညှင်းလာကာ တဖြည်းဖြည်းအိပ်မောကျသွားရော။ သူ့ကိုနှိုးလိုက်ရမလား တွေးမိသေးတယ်။ သူက သူအိမ်ပြန်သင့်တယ်လို့ ပြောတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်တည်း အိပ်မောကျခဲ့တဲ့ညများစွာမှာ ဒီတစ်ညတော့ သူ့တစ်ပါးရဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ လုံခြုံနွေးထွေးစွာ အိပ်စက်အနားယူချင်မိတယ်။ အထီးကျန်နွေရာသီမှာ အကြင်နာလေပြေလေးတစ်ခါရရပေါ့။ ကဲပါ.......ဘာမှမစဉ်းစားတော့ပါဘူး.......ခန္ဓာကိုယ်ကို အလိုက်သင့်ဖြေလျော့....ဖက်တွယ်ထားတဲ့လက်မောင်းတွေကြား ရင်ခွင်ထဲမှာ.......ကျွန်မ..။
Posted by Alex Aung at 9:07 PM 1 comment:
အရွယ်တော် တစ်ဆိတ်ဟိုင်းပြီထင်ပါရဲ့။အိုကေပါ......ဒီတိုင်းပြည်မှာ အသက်၄၀မှ ဘ၀စတာလို့ပြောကြာတာမို့လား။ ကျွန်မအသက်က အခုမှ ၄၀အစပဲရှိသေးဥစ္စာ။ ကောင်ငယ်ချောလေးတွေကြိုက်နိုင်မယ့် အနေအထားတွေပိုင်ဆိုင်နေပါသေးတယ်။ ဒီအသက်အရွယ်...လမ်းမှာ ယောက်ျားလေးတွေလည်ပြန်လှည့်ကြည့်ရလောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်လေ။ ဘ၀မှာ ရပ်တည်မှုအတွက်ပဲ အချိန်ရှိသရွေ့ ကြိုးစား ခဲ့တာ။ အခြေတကျနေထိုင်ဖို့၊ ၀င်ငွေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖို့ အာရုံစိုက်နေရ တာနဲ့ သက်လတ်ပိုင်းရွယ်မှာမှ ပျော်ရွှင်မှုအတွက် အချိန်ပေးနိုင်တော့တယ်။ ကြည့်ကောင်းတဲ့ သက်လတ်ပိုင်းရွယ်လူတွေ ဒီနေရာမှာ အားသာချက်က အသက်အရွယ်လည်းတည်ငြိမ်ပြီ၊ငွေကြေးလည်း အသင့်အတင့်ရှိပြီဆိုတော့ ကိုယ်ပျော်သလို နေပိုင်ခွင့်ရနေပြီပေါ့။
အခုအစားအသောက်ကောင်းလေးတွေလည်းရ အစင်လေးတွေလည်း မကြာခဏတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကိုလာစား နေတာ။ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကောင်လေးတွေကတော့ သူတို့အမေအရွယ်ဆိုတော့ အာရုံမလာဘူးထင်ပါရဲ့ ကျွန်မကိုဂရု မစိုက်ကြဘူး။ သူတို့မျက်လုံးတွေက ရွယ်တူကောင်မတွေဆီကိုပဲကြည့်ပြီး ဒီကိုကျော်ကျော်သွားတာ။
တစ်ယောက်ယောက်က ငါ့ကိုကြည့်နေသလားဆိုပြီး မျက်စိကစားကြည့်မိတော့ ၀ိတ်တာကောင် လေးတစ်ယောက် စိုက်ကြည့်နေတာများကြက်သီးတောင်ထတယ်။ ဒီဆိုင်ကို မကြာခဏရောက်သလို ဒီထောင့်မှာထိုင်နေကြ ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီကောင်လေးကို မမြင်ဖူးပါဘူး။ အသစ်လေးဖြစ်မယ်....ဟီး..ဟီး။ ရှိလှမှ ၂၇ ၊ ၂၈နှစ်လောက်ပဲ။ စကားစမြည်ပြော နောက်ပြောင်နေရတာ ပျော်ဖို့တော့ အကောင်းသားသူနဲ့။ သူ့ကို ဘောနပ်ကောင်းကောင်းပေးအောင် လုပ်နေတာလား ဘာလားတော့မသိ လူကိုကပြီတီတီနဲ့။
"I get off at nine. Call me if you'd like to get together." တဲ့ ဘီလ်ရှင်းတော့ လိပ်စာကဒ်လေးကို မသိမသာထိုးပေးရင်းပြောတာ အံ့ရောပဲ။
" Excuse me?" နားလည်မှုလွဲသလားလို့။
ကောင်လေးမျက်နှာက ရှက်သွေးဖြန်းပြီးရဲ ကနဲဖြစ်သွားကာ သူ့ခြေထောက်ကိုသူငုံ့ကြည့်လိုက်ရင်း နောက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကာ "I thought may be.... I don't know that we could hook up." လို့ပြောလာတယ်။ သူ့ကိုပြုံးကြည့်ရင်း "Hook up? You mean have sex." ပြောလိုက်တော့ ရှက်သွေးဖြန်းပြန်ပေါ့ သူ့မျက်နှာ။
"အစ်မ စိတ်မ၀င်စားဘူးပေါ့" ကောင်လေးက စိန်ခေါ်သလိုမေးတယ်။ သူ့ပုံစံကိုငြင်းမဲ့သူမရှိလောက်ဘူး ယုံကြည်ချက် နဲ့ပေါ့လေ။"အိုး...စိတ်ဝင်စားပါတယ်၊ မင်းဘာလုပ်ချင်လို့ပြောတယ်ဆိုတာ သေချာအောင်မေးရတာလေ ကောင်လေးရဲ့။" အင်း...စော်ကားတဲ့ပုံတော့မပေါက်ပါဘူးလေး sex လုပ်ဖို့ သူ proposing လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံက။ " SO, I get off at nine, call me if you're interested." လို့ပြန်ပြောတော့ သူ့ကိုခေါင်းငြိမ့်ပြရင်း လိပ်စာကဒ်ကို လက်ပွေ့အိပ်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်။
တွေးစရာတွေတော့ ပေးနေပြီ။ တကယ်လား....ဘယ်လောက်တောင် ကျော်မကောင်း ကြား မကောင်းဖြစ်လာမယ့်အဖြစ် အပျက်လည်းဆိုတာတွေ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်လောက်ကျေနပ်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်စရာပဲ မဟုတ်လား။ သူဟာ ဘယ်လိုကြည်ြ့မင်ခဲ့သလည်း၊ ကျစ်လစ်တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရှိတဲ့ ကောင်ကလေး ကို တစ်ညတာ ရယူနိုင်မယ်တဲ့ ဘယ်လောက် အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းလဲ။
၉နာရီတော့ ထိုးတော့မယ်...လက်တစ်ဖက်က ဖုန်းကိုကိုင် ကျန်တစ်ဖက်က သူ့လိပ်စာကဒ်ကို ကိုင်ပြီးတော့ တွေဝေမိသပေါ့။ပတ်ဝန်းကျင်က ဘာတွေပြောမလည်း၊ သူကရော အထင်အမြင်သေးမှာလား၊ ဒီအဖြစ်အပျက်မျိုးက ရိုးနေပြီထင်ပါရဲ့လေ....။ ငါကသာအတွေးချောင်တာနေမှာ။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလည်း မစဉ်းစားတော့ပါဘူး။ ခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူ နံပါတ်တွေကိုနှိပ်လိုက်တော့ First ring မည်ပြီးမှာ သူကပြန်ထူးပါတယ်။
"Hey. It's me," အသံကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းလို့ပြောရင်းပေါ့။
"So, do u want to hook up?" သူက သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ ပြောတယ်။
ဘယ်လောက်တောင်ထူပူမိနေသလဲမသိ။ ကိုယ့်အသံတောင်ကိုယ်ဘေးက ပြန်ကြားမိသလိုခံစားရတယ်။
"ဘာလည်း.....မင်းကိုမပြောပြချင်သေးဘူး...မင်းကို ကိုယ်မှ မသိသေးတာ။"
" ခင်ဗျား...ကျွန်တော်နဲ့ အတူအချိန်ဖြုန်းမယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။" ခပ်ဖွဖွရယ်ရင်း ပြောတာများ လူကိုရှက်ရော။ ဒီညသူ့အခန်းကိုလည်းသွားလို့မကောင်းဘူး သူ့အခန်းဖောက်ရှိလို့တဲ့။ တက္ကသိုလ်နားကအဆောင်တွေက ဒီလိုပါပဲလေ။ မလွတ်မလပ်နဲ့ privacy သိပ်မကောင်းဘူး။
" နာရီဝက်လောက်ကိုယ့်ကို အချိန်ပေး။ မင်းကိုပြန်ခေါ်မယ်၊ ဘယ်နေရာမှာတွေ့မယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောမယ်...အိုကေလား"။
ထိန်းထားတဲ့စိတ်တွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလည်း မသိတော့ပါဘူး။ အခုမှသိတဲ့ လူစိမ်းတစ်ယောက်အတွက် ၊ သူနဲ့ သီးသန့်တွေ့ဖို့ ဟိုတယ်မှာ အခန်းတစ်ခန်း ယူလိုက်မိပြီ။ အပြုံးတစ်ချက်က တော်တော်ဖမ်းစားနိုင်တာပဲ။ အိုး.....ဘယ်လောက် ပျော်စရာကောင်းလဲ။ အန္တရာယ် ၊ရူးသွပ်မှု ပြီးတော့ အပျော်ရောနေတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အချိန်ပါပဲ။ ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖီးလ်မျိုးကို မခံစားရတာကြပါပြီ။
၂၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ထိုင်ရင်း ကျွန်မရဲ့ကောင်ငယ် ၀ိတ်တာချောလေးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုခေါ်မိပြီပေါ့။ ရင်ခုန်သံတွေတထိတ်ထိတ်နဲ့။ " Room 225 at the Marriott." လို့သူ့ကိုပြောပြီး ဖုန်းကိုချ တီဗီကိုဖွင့် စိတ်ကိုလျော့ပေါ့။ ရင်ဆိုင်လိုက်တာပေါ့လေ စိတ်ရှုပ်ထွေးနေမဲ့အစား။ သူများတွေ ဒုက္ခကြုံပေမဲ့ ကိုယ်တော့ သုခရနိုင်မယ်ထင်ပါရဲ့လေ။
အသက်အရွယ်ရတဲ့လူတွေက ကိုယ့်ထက် အတော်အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ ဒိတ်တဲ့အခါတချို့က ငွေညှစ်ခံ ရသတဲ့။ အန္တရာယ်ပြုခံကြရသတဲ့...ကြားရတာတွေက ။ ကဲ...ပါလေလက်တွေ့ကျမှပဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလိုက်တာပေါ့။ ဒီကောင်လေးရည်ရွယ် ချက်က လုယက်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလား၊ အဖိုးတန်ပစ္စည်းနဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်တွေကို လုံခြုံတဲ့ အထဲထည့်ပြီးသော့ခတ်ထားပြီးပြီ။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က မဟားဒယားလုပ်ဖို့လား၊ ဟင့်အင်း....အဲဒါရူးသွပ်မှုပဲဖြစ်မှာ..။ ကျွန်မရဲ့စိတ်ဆန္ဒလိုလားချက်တွေကိုတော့ အိနြေ္ဒပျက်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူး။ သတ်ဖို့များလား..Yeah ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် မမှတ်မိတော့ပါဘူး....ဟီး..ဟီး။ ၄၅မိနစ်လောက်ကြာတော့ ...တံခါးခေါက်သံ ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်မအရှက် ကိုခွဲဖို့မဖြစ် ပါစေနဲ့...လေ။
တံခါးမကြီးကိုဖွင့်လိုက်တော့ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊တီရှပ် တစ်ထည်နဲ့ စတိုင်လ်ကျကျ ရပ်နေတဲ့ ကိုလူချောကိုမြင်လိုက်ရသား။ ချပ်ရပ်တင်းရင်း နေတဲ့တီရှပ်က တဆင့်မြင် ရတဲ့ ကြွက်သားအမြှောင်းအမြှောင်းတွေက သူ Gym မှာအချိန်တော်တော် သုံးလေ့ ရှိသူဆိုတာသိသာသလို လေဒီတွေရဲ့ ရင်ခုန်သံကိုမြန်စေမဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်တာ ကိုလည်း မျက်နှာနုနုပေါ်မှာ မြင်နေရပါတယ်။
"မင်းစိတ်ပြောင်းသွားပြီလို့ ကိုယ်ထင်နေတာ" အခန်းထဲပြန်ခြေလှမ်းချရင်းပြောတော့ စပ်ဖြဲဖြဲပြုံးရင်း "လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကတည်းကရောက်နေတာဗျ၊ တံခါးခေါက်ဖို့လန့်နေလို့"။ အိုး...ကောင်ကင်ကသာကြည့်ရင် နံရံအခြားတစ်ဖက်က ရင်ခုန်စွာစောင့်မျှော်နေသူနဲ့ အခြားတစ်ဖက်မှာ တံခါးကိုခေါက်ဖို့ပြင်နေတဲ့သူ နှစ်ယောက်ကို မြင်နိုင်ခဲ့မယ်ထင်ရဲ့။ သဘောကျစရာတော့အကောင်းသား။
"ကျွန်တော်အရင် ကဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးဗျ" သူကရှင်းပြသလိုနဲ့ အရှက်ပြေပြောတယ်။
"Picked upacustomer from the restaurant"
"အိုး..ကိုယ်ထင်နေတာက Old lady တွေနဲ့မင်းမပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ထင်နေတာ။" သူစိတ်ပျက်အောင်ပြောကြည့်လိုက်တာ။
"အသက်ကြီးတယ်၊ ခင်ဗျား ကျွန်တော့်ထက် အသက်အဲဒီလောက်မကြီးပါဘူးဗျ။"
"ပြောတတ်လိုက်တာ၊မင်းက ငါ့အသက်ကို ဘယ်လောက်ရှိပြီလို့ထင်လို့လည်း။ မဖြေပါနဲ့ဦး...မင်းအသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီဆိုတာကိုရောပေါ့။ တော်ကြာ ငါလန့်သွားဦးမယ်...ဟား..ဟား။"
အပြုံးနုနုပြုံးပြရင်း ခြေလှမ်းတွေ တစ်လှမ်းခြင်းတိုးက ကိုယ်ခန္ဓာနှစ်ခုပူးကပ်သည် အထိနီးလာအောင် သူလုပ်တယ်။
"ကျွန်တော့်စားပွဲမှာထိုင်တာကိုမြင်ကတည်းက သတိထားမိတာ၊ ခင်ဗျားအသွင်အပြင် ကိုကြည့်တော့လည်း ခပ်တင်းတင်းဆိုတော့ ကြိုးစားကြည့်ရတာ ခန့်လန့်လန့်ပဲဗျ။" နူးညံ့စွာနမ်းရင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာတယ်။
Posted by Alex Aung at 9:37 PM No comments: